FAA,IIDADA DHIMASHADA – Sumcadda Islaamka
Ka warran haddii aan muddo noolayn oo aan haysannay garasho ama caqli aan ku noolaanno. Haddii aan noolayn muddo, waan dhimanay. Waxaan aragnay salkii iyo ciribtii camalkeennii intii aan noolayn. Sidii aan u fikiraynay iyo wixii aan aamminsanayn waxay noqdeen, wax aan faa’iido lahayn. Cadaab iyo ciqaab ayaan qoorta lagalnay.
Haddii aan muddo ku jirnay cadaab aad u daran, oo aan la ximmili Karin, naxariistii Alle ayaa noo timid. Waxaa nala siiyay fursad, aan markale adduunkii ku soo noqonno, oo aan markaas ka fikirno inaan baddalno afkaartii xumayd ee aan cadaabka ku galnay. Haddii aan soo noqonay, haddana waxaan halkii ka sii wadnay, sidii hore ee aan cadaabka ku galnay. Waa khasaaro iyo dhib joogto ah.
50 sano oo la soo dhaafay, waxaan wadnay wax nakala qaybiya oo isku keen dira. Abtirsiinyo qabiil ku salaysan, is xaqirid iyo kala sarayn. Boob iyo dulmi. Diintii Islaamka waan fasirnay. Waxaan ka dhignay, wax la isku khilaafo oo lagu kala tago oo ciil iyo caro la isugu qaado. Kaas waa bidcay. Kaas khuraafi. Kaas salaadda laguma xiran karo. Kaas aniga ayaa ka fiican. Kaas waa gaal. Kaas Naartii ayuu galayaa. Kaas Diintii wuu ka baxay. Masaajidkaas laguma tukan karo. Waxaa waajib ah inaan isku jihaadno, oo qoloba qoloda kale ku janno tagto.
Dawladdii way gaalowday. Dhammaan wixii dawlad u shaqeeya waa gaalo. Waa in lala jahaadaa. Dawladdaan reer hebal ayaa nacfi ku qaba. Annaga waa nalaga badsadaa. Waa inaan baabi’nnaa oo kulligeed meesha ka saarnaa, maxaa yeelay looma dhamma.
Haddii aniga xukunka la’iga baddalayo ama awoodda la iga qaadayo, waa inaan waxba iga danbay. Waan kala qaybinayaa dadka, waan iska horkeenayaa. Kadibna dal mooyee dad igama danbaynayo. Kontan (50) sanayo ayaan ku shaqaynaynay afkaar iyo caqiido noocaas ah. Waxaan moodaynay inaan fiicannahay oo shaqo fiican aan hayno. Dadkana waxaan u sheegaynay inay wanaag iyo barwaaqo ka dhargi doonaan haddii ay sidaas sii wadaan oo noocaas kala qaybinta, nacaybka iyo qabyaaladda ku salaysan sii wadaan.
Kadib, waan dhimannay. Camalkeennii ka dhashay fikirkirkeennii ayaa nala soo hordhigay. أقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
Mise, camalkeennii waa kharaab. Kulligi waa colaad, nacayb, cuqdad, dagaal, hunguri, qabyaalad, gaajo, faqri, jahli, dulli, tuugsi, baryo aadane, foolxumo oo dhan. Si cad, oo aan fasir iyo tilmaan ahayn ayaan u aragnay natiijadii fikirkannagii iyo camalkannagii. Markaas ayaan calaacallay. Oo ku dhawaqnay: ربنا أخرجنا نعمل غير الّذى كنّا نعمل.
Haddii aan markale dib inii celiyo, ma is baddalaysaan? Haa Rabbi.
Waxaan ka wadaag waa tusaale ahaan. Waataan aragnay intaan noolayn natiijada fikirkeennii iyo camalkeennii. Waataan dalkeenni iyo dadkeenni gacmaheenna ku duminnay. Waataan helnay, wax kasta oo aynaan rabin. Waa innaga tusaalaha u noqonay wax kasta oo xun. Faqri, jahli, cudur waa innaga ka dharagnay. Haddii innaga oo nool aan aragnay camalkeenna mirihiisii, maxaan sugaynaa markaan dhimanno in camalkeennii la ina tuso, oo aan markaas naarta ku daahno. (Alle ayaan ka magan gallaye) Maan hadda inta goori-goor tahay toobad keenno oo Alle u noqonno, oo is baddalno?
Waxaan walaalahay Soomaaliyeed ka codsanayaa inaannaan sugig geerida annaga oo xanbaarsan afkaartii iyo camalkii cadaabka adduunka nagu galiyay, ee aan ka tooban keenno inta aan noolnahay.
“أن الله لايغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم”